Ankoatra ny arendrina sy ireo kojakoja maro samihafa ilaina amin’izany dia tsy adinoina ny akoho amam-borona izay efa hita mirantiranty manerana ny tsena eto Antananarivo. Mbola maina ny tsena, raha araka fanadihadiana natao tamina mpivarotra iray tetsy Isotry. Tsy niakatra anefa ny vidim-borona fa nitovy tamin’ny fankalazana ny fetin’ny paska sy pentekosta teo ihany. Nahitana fihenany aza satria lasa 50.000 Ar latsaka ny vorontsiloza vavy sy ny gisa, 20.000 Ar ny gana raha 15.000 Ar ny akoho. Hanomboka anio talata 25 jona vao manantena ny ho tsara tsena ireo mpivarotra raha tsy misy ny sampona. Tsy ny vorona irery fa na ny hena aza dia mitaraina ihany koa ireo mpivarotra fa zara raha mahalafo.